Suldaan AADAN FAARAX Suldaanka ee Cidagale waa halyeey qaran. | Salaan Media
Suldaan AADAN FAARAX Suldaanka ee Cidagale waa halyeey qaran.
Suldaan AADAN FAARAX suldaanka cidagale waa halyeey qaran.
Suldaanka cidagale suldaan AADAN FAARAX ayaa aad loo soo dhaweeyay kadib markii uu kooxda talinta iyoo Toosinta sheegatay runta u sheegay , haddaba qoraalo ay qoreen haddaba waxa qoraalo soo galiyey ay ku weerayraan ina cabdiqaadir iyo ina guure ay soo galiyeen interneka SULDAAN AADAN faaraxa waa qof miyir qaba oo karaamo leh oo ummadu fahmi karayso .haddaba ina guure iyo ina cali waraabe oo aan siyaasad waxaba ka garanayn ummaduna qososho markay hadlayaan ha nabadgeliyaan suldaanka CIDAGALAHA ee miyirka iyo shrafta leh
Gudidii Salaadiinta ee waday isu soo dhawayntii Xukuumadda iyo Golaha la baxay wada tashiga iyo toosinta qaranka, ayaa caawa shir jaraa’id oo ay ku qabteen Magaaladda Hargeysa waxay daboolka kaga qaadeen in ay hungo iyo faro madhan ka taagan yihiin Golahaasi oo ay ku tilmaameen qaar aan ujeedadoodu cadayn.
Suldaan Aadan Faarax oo ah Guddoomiyaha Gudidii Salaadiinta Somaliland u xil-saareen isu soo dhawaynta xukuumadda iyo golaha la baxay wada tashiga oo ugu horayn ka hadlay shirkaasi jaraa’id waxa uu sheegay inuu bulshadda Somaliland u xaqiijinayo in waan-waantii ay wadeen ka socon wayday dhinaca Golihii la baxay wada tashiga iyo toosinta qaranka.
“Annagu halkan waxaanu ku fadhinaa Gudidii ay Salaadiinta Somaliland u saareen xal u helida siyaasiyiinta la baxay Golaha. Waxaanu doonaynaa inaanu halkan ka sheego wixii aanu kala kulanay dhex dhexaadintii aanu wadnay. Marka u horaysa waxaanu u mahad naqaynaa salaadiinta Somaliland oo soo qaban qaabiyay Gudidayadan ay u xilsaareen arrintan. Gudidayadii waxaanu markii u horaysayba la kulanay siyaasiyiintii arrintan cusub keentay waxaanu la kulanay dhawr goor oo aanu kula kulanay Huteelka Ambassador waxaanu weydiinay waxay ka cabanayeen. Waxay markii aanu aad u wada hadalnay ay sheegeen inay doonayaan inay la kulmaan Madaxweynaha Somaliland. Annaguna waxaanu u sheegnay inay ku dhawaaqeen gole baal-marsan sharciga. Waxaanu ku boorinay inay ka noqdaan Golahan. Waxay nagu yidhaahdeen waanu ka noqonay.”
Suldaan Aadan Faarax oo hadalkiisa sii watay waxa uu intaasi ku daray “Markaas ka dib waxaanu la kulanay madaxweynaha Somaliland oo aanu ku nidhi nimankan odayaasha ah la kulan, maadaama oo ay ka noqdeen Golihii. Waxaanu ku nidhi Madaxweyne waxaanu kaa baryaynaa inaad la kulanto iyagoo aan ahayn Gole dastuuri ah. Madaxweynuhu si sharaf leh ayuu arrintaasi nooga aqbalay.”
“Ka dib waxaanu ku noqonay Golahan waxaanu ku nidhi waxaad keenaysaa Guddi kooban oo la kulanta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo magacyadooda. Gudidaasi oo aanu annaguna la kulmi doono iyagoo socda. Waxaanu sidaasi ku war-gelinay Guddoomiyahoodii Xasan Guurre. Markaa waxaad moodaa nimankii ugu dambayntii saaka oo u dambaysay ayaanu ka sugaynay magacyadii iyo Gudidoodii, si aanu u geyno idinkana aynu wax isa sii tusno waayo qoddobo kale iyo waxyaabo ayay sheeganayeen,”ayuu yidhi Suldaan Aadan Faarax.
Suldaanku waxa uu sheegay inay saaka hungo kala kulmeen siyaasiyiintaasi isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaanui saaka kala kulanay waxba la’aan iyagoo laba nin ah ayay noo yimaadeen. Waxaan idiin sheegaynaa inaanu nimankaas kala kulanay rajo la’aan. Waxaanu ummadda reer Somaliland uga mahad naqaynaa sidii ay noola shaqeeyeen. Waxaanu u sheegaynaa dadka inay dalkooda iyo nabadgelyadiisa ilaashadaan. Waxa la yidhi ninka arrin bidco ah sameeya haddii ay khayr leedahayna illaa qiyaamaha ayuu ajarkiisa leeyahay, haddii uu shar yahay illaa qiyaamaha ayuu sharkiisa leeyahay. Markaa arrintaasi bidco ayay ahayd ee ka noqda oo dalka dani uguma jirtee.”
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxaanu uga mahad naqaynaa inuu ergadii aanu ula tagnay naga aqbalay iyadoo waxaanu ula tagnay markii horeba aanu sharci ahayn ayuu danta dalka nooga aqbalay,”ayuu yidhi Suldaan Aadan Faarax.
Suldaan C/raxmaan Cabdilaahi Aw- Good oo isna halkaasi ka hadlay wuxuu yidhi “Waxaanu isku xilqaanay inaan hadalkaas soo baxay aanu khilaaf gudaheena ah dhalin isla markaana aan loo baahnayn, maadaama oo aynu cadow faro badan oo dibadeed leenahay inay dhexdeennu asturnaataa way wanaagsan tahay, sidaas darteed, inaanu arrintaasi dhex galno ayaanu dhaqan ahaan isla qaadanay. Waxaan idiin sheegaynaa in nimankaasi ay aanu waxba la’aan kala kulanay. Laakiin madaxweynuhu ergo kasta iyo wax kasta oo aanu ula tagnay wuu naga yeelay.”
“Raggaas Golaha sheegtay Golaha waxa u dheeraad ahaa cay iyo aflagaado, madaxweynihii oo ay caayeen ayaa haddana naga yeelay inay hor yimaadaan oo uu la kulmo. Waxaanu la kulanay siyaasiyiintan waxaanu ku nidhi Madaxweynuhu wuu aqbalay inaad la kulantaan ee Guddi kooban soo dirta. Waxa guddoomiyahoodii nagu yidhi sagaal xubnood ayaan soo diraynaa. Markii aanu lix cisho sugaynay. Salaadiinta waxay ku yidhaahdeen Golihii waanu ka noqonay, laakiin meel qudha oo ay ka cadeeyeen inay ka noqdeen ma jirto. Ugu dambayn saaka waxay nagu yidhaahdeen waxba idiinma hayno, wax dambena idiinla iman mayno,”ayuu yidhi Suldaan C/raxmaan Cabdilaahi Aw-good.
Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Suldaan Xiis Barre oo bulshadda ugu baaqay inay nabad-gelyadooda ilaashadaan, Golahana ugu baaqay inay ka tanaasulaan waxay sheegteen. Waxa shirkan jaraa’id goob joog ka ahaa 18 ka mid ah Gudidii Salaadiinta ee muddo ku jirtay xal u helida murankaas.